U-Adepero Oduye uzakuba yinxalenye yabadlali beNkanyamba uKatrina yeApple TV + | Ndisuka mac
U-Adepero Oduye uzakuba yinxalenye yabalingisi malunga neNkanyamba uKatrina yeApple TV +
Ekuqaleni kukaSeptemba, sishicilele inqaku elinxulumene nenye yeeprojekthi ze-Apple zexesha elizayo ngenkonzo yevidiyo yokuhambisa, iprojekthi enxulumene INkanyamba uKatrina idlula eNew Orleans ngokusekwe kwinoveli Iintsuku ezintlanu eSikhumbuzweni nguPulitzer Umbhali oPhumeleleyo uSheri Fink.
Olu ngcelele, olukhokelwa nguJohn Ridley kunye noCarlton Cuse, luzakudlala umlingisi uAdepero Oduye, owaziwa ngendima yakhe kuthotho lweDisney + Falcon kunye neSoldier yasebusika, ngokutsho kwabafana beHollywood Reporters. Oduye uyakutolika Uza kudlala umongikazi oyintloko kwiSibhedlele iSikhumbuzo ekwayalela ikomiti yeenqobo ezisesikweni esibhedlele.
Oduye Ukufumana iBhaso likaMoya kunye nokuchongwa kweBhaso loMfanekiso le-NAACP ngendima yayo kwi Pariah, ukusukela ngo-2011. Singayifumana nakolu ngcelele Le yindlela abasibona ngayo ukusuka kwiNetflix, Iimagnoli zensimbi Ubomi bonke kunye neefilimu Abahlolokazi y Omfutshane.
Iintsuku ezintlanu eSikhumbuzweni Ubalisa emva kwenkanyamba uKatrina Ukusuka kwindawo yokujonga iSibhedlele iNew Orleans Memorial. Ngokusekwe kwinoveli yomlingisi oPhumeleleyo weBhaso likaPulitzer uSheri Fink, uthotho luyehlela kwimilinganiselo yokuziphatha neyokuziphatha abalinganiswa abajamelana nayo ngexesha lokuvavanywa.
Indima ephambili kolu ngcelele iya kudlalwa ngu UVera Farmiga, kwindima ka-Anna Pou otyholwa kukukhuthaza abaguli abagula kakhulu emva kokuhlala esibhedlele iintsuku ezininzi.
Ukuveliswa kwale miniseries kuya kulawula iFink, ngelixa uRidley noCuse, ukongeza ekubeni ngabalawuli, Baza kusebenza njengababhali bekhusi kunye nabavelisi abalawulayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Adepero Oduye uzakuba yinxalenye yabalingisi malunga neNkanyamba uKatrina yeApple TV +
UJustin Timberlake uzakudlala noChuck Barris, umbulali weCIA